La kulan – Garsooraha heerka caalami ee Maxamed Soomaali | Radio Himilo
Home / Cayaaro / La kulan – Garsooraha heerka caalami ee Maxamed Soomaali
La kulan – Garsooraha heerka caalami ee Maxamed Soomaali
Himilo FM –Maxamed Nuur Muxidiin oo ku caan baxay magaca Maxamed Soomaali waxa uu ku dhashay degmada Yaaqshiid ee gobalka Banaadir, sanaddii 1989-kii. Waxa uu ku barbaaray magaalada Obakh ee dalka Jabuuti. Waxa uu dugsi Qur’aan iyo dugsi hoose ku qaatay isla magaalada Obakh.
Sannadkii 1999-kii ayuu yimid magaalada Muqdisho, waxa uu dugsiga dhexe ku dhameystay dugsiga Al-Nuur, sanaddii 2005-tii ayuu dugsiga sare kaga aflaxay Macallin Jaamac. Sidoo kale waxa uu darajada koowaad ee jaamacadda ka diyaariyay kuliyadda saxaafadda gaar ahaan jaamacadda Khartuum.
Sanaddii 2004-tii ayuu ku soo biiray mihnadda saxaafadda isaga oo ka mid noqday shaqaalaha Radio Banaadir, waxa uuna idaacadasi ka shaqeynayay illaa 2014-kii. 2007-dii waxaa loo magacaabay tifaftiraha guud ee Radio Banaadir waxa uuna xilkaasi hayay intii u dhaxeysay 2007 illaa 2009.
2015-kii waxa uu kamid noqday Dalsan Radio muddo yar kaddib waxaa loo magacaabay madaxa Barnaamijyadda, Maxamed waxa uu ahaa hindisihii ugu horreeyay ee barnaamijka tartan aqooneedka Radio Dalsan. Sanaddii 2016 ayuu soo gabagabeyay u shaqeynta Dalsan Radio iyo guud ahaan mihnadda warbaahinta.
2013-kii ayuu kusoo biiray saaxada garsoorka isaga oo ka bilaabay garoomada bacaadka sida Qoobdooro, Waamo, Iskuul Jabuuti iyo garoomo kale.
Wixii intaasi ka danbeeyay Maxamed waxaa u ifay shumicii hibadiisa garsoor. 2014-kii waxa uu kamid nooday garsoorayaasha heerka seddexaad kaddib sannadkii 2015 waxa uu u dalacay heerka labaad.
waxa uu ka qeyb galay isla sannadkaas seminaar ay si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen FIFA iyo Caf oo ku saabsanaa sare u qaadista garsoorayaasha mustaqbalka leh, waana markii ugu horreysay oo tababar ceynkaasi ah loo qabto garsoore aan caalami aheyn, waxa uuna tababarkaasi uu ka dhacay magaalada Daaru Salaam ee dalka Tanzania.
Dib u soo laabashadisa kaddib waxa uu dhexdhexaadiyay kulan ciyaareed xiisa badnaa oo u dhaxeeyay kooxaha Badbaado iyo Saxafi kulan kooxdii badisa ay u soo baxeysay horyaalka heerka koowaad, taasi waxay sababtay in loo dalacsiiyo heerka koowad kaddib markii lagu qancay go’aan qaadashadiisa, waxa uuna ciyaartiisii ugu horreysay uu dhexdhexaadiyay kooxaha Horseed iyo Dekedda natiijo ciyaareed ku soo idlaatay barbaro 3-3 ah.
Sanaddii 2015 waxa uu garsooray finalka Super Cup ee u dhaxeeyay Horseed iyo Heegan. Sannadkii 2016 waxa noqday garsoorihii ugu horreeyay ee adeegsada aaladda ay iskula hadlaan garsoorka oo ay isticmaalaan dalalka horumaray waxa uuna kulankaasi dhexmaray Heegan iyo Elman.
Seddex sano oo xiriir ah laga bilaabo 2015 ilaa 2017 waxa uu nasiib u yeeshay in uu dhexdheexdiyo finalka koobka degmooyinka gobalka Banaadir. 2017 waxa uu noqday garsoorkii ugu horreeyay ee xilli habeen ah ciyaar dhexdhexaadiyo , waana kulankii u dhaxeeyay Hodan iyo Waaberi. Sannadkii 2018 ayaa markiisii ugu horreysay loo magacaabay garsoore heer caalami waxaana aqoonsaday hay’adda ugu sarreysa kubadda cagta ee FIFA.
Ciyaartii ugu horreysay oo dibadda ah waxay ahayd ciyaaraha Champions League oo ay dheelaan kooxaha Afrika, kulan uu ahaa sarkaalka afaraad ciyaar ka dhacday magaalada Kambala una dhaxeysay kooxo ka kala socday waddamada Ugandha iyo Congo.
Sidoo kale kulankii ugu horreeyay oo uu noqdo garsooraha koowaad waxay ka dhacday Addis Ababa kulan ciayareed u dhaxeeyay Itoobiya iyo Burundi natiijo ay 2-0 ku badisay Burundi kulan ka tirsanaa ciyaartoyda ay da’doodu ka hooseyso 20-jirrada ee CAF.
Isla sannadkaasi waxaa loo xulay in uu kamid noqdo garsoorayaasha dhexdhexaadin doona kulamada ay dheelayaan ciyaatoyda ka hooseeya 17-jirrada ee Cecafa, isaga oo ciyaartii ugu horreysay seeriga u qabtay Tanzania iyo Ugandha natiijo ku idlaatay barbaro 1-1 ah.
Waxa uu sidoo kale isla koobkaasi dhexdhexaadiyay kulanka kaalinta seddexaad oo ay ciyaarayeen Kenya iyo Ugandha. Kulamada oo garsooray waxaa kamid ah kulan dhexmaray naadiyo ka socday dalalka Jabuuti iyo Kenya.
Sanaddii 2018 waxa uu ka qeyb galay seminaar aqoon kororsi ah oo loo qabtay garsoorada cusub ee FIFA kaasi oo ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar.
2018 waxaa loo magacaabay garsooraha sannadka Soomaaliya oo ay bixiso Mogadishu Awards codeyn ku timid afti dadweyne. Isla sannadkaasi, waxa uu kamid noqday xiriirrada Cecafa, Caf iyo FIFA.
Maxamed waxa uu kamid yahay garsoorrada u diiwan geshan xiriirka kubadda koleyga isaga oo kusoo biiray 2017.
Maxamed Xasan Maxamed “ Owen”
Previous: Diyaarad si deg deg ah u caga dhigatay markii rakaab badan ku xanuunsadeen!
Next: Cristiano Ronaldo oo maanta hortagaya maxkamad